Ndepụta Ọdịnaya Marketing ROI maka Dummies | Martech Zone
Ndị folks nọ na Uberflip ewerela ụzọ sara mbara gbakọọ ịre ahịa ọdịnaya gị na itinye ego, ma tinye ya na infographic uber a.
Ewu ewu na nke ọdịnaya ọdịnaya bụ-apụghị ịgbagha agbagha. Dị ka Ụlọọrụ Marketing Content, ihe karịrị 90% nke ụdị ugbua etinyela ego na eBooks, vidiyo, mgbasa ozi mmekọrịta, ịde blọgụ, na ọwa ndị ọzọ. Otú ọ dị, ọ bụ ihe na-erughị ọkara n’ime ha maara nke ọma otu esi agbaso ihe ịga nke ọma nke mbọ ha.
Naanị ndụmọdụ m na-eji usoro a bụ ịghọta nke ahụ ROI na ọdịnaya adịghị agbanwe agbanwe, ọ na-agbanwe oge. Ọtụtụ mgbe, nloghachi na itinye ego na otu akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ infographic ma ọ bụ ọbụlagodi blog nwere ike ime ka ikike gị dị elu ma bawanye ego ugboro ugboro. Ihe ewu ewu nke ọdịnaya gị taa nwere ike imetụta arụmọrụ nke ọdịnaya gị echi. Ọdịnaya Ahịa ROI abụghị ngụkọta ọnụ ọgụgụ, ọ bụ nke chọrọ ma na-ewulite oge karịa oge.
Tags: uru ahịa ahịaọnụ ahịa ahịa ọdịnayaọdịnaya ahịa roimgbanwedummiesinfographiclaghachi azụmaahịaROIòkè nke olu
Mee 11, 2014 na 6: 48 AM
Akwa post Doug! Daalụ maka ịkekọrịta…
Mee 12, 2014 na 9: 17 AM
Ekwenyere m na gị, ịkekọrịta ezigbo ihe gbasara nsuso ọdịnaya ahịa ROI maka dummies ndị siri ike ikwurịta. O nyeere m aka ịbawanye ihe ọmụma gbasara ịre ahịa ọdịnaya. Mkparịta ụka gị niile dị ezigbo mma ma baara mmadụ niile uru. Daalụ ịkọrọ anyị ụdị ozi bara uru dị otú a.